Ifekthri - Chengdu Hemeikaineng Medical Equipment Co., Ltd.
Inkampani yethu isebenzisa ngokugcwele uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi ye-ISO9001 kanye nesistimu yekhwalithi yedivayisi yezokwelapha ye-ISO13485, futhi isebenzisa ngokuqinile ukuhlola okuthathu ekukhiqizeni: ukuhlolwa kwempahla eluhlaza, ukuhlolwa kwenqubo kanye nokuhlolwa kwefekthri;Izinyathelo ezifana nokuzihlola, ukuhlola okuhlanganyelwe, nokuhlola okukhethekile nakho kuyamukelwa ngesikhathi sokukhiqiza nokujikeleza ukuze kuqinisekiswe ikhwalithi yomkhiqizo.Qinisekisa ukuthi imikhiqizo engafanelekile inqatshelwe ukuphuma efekthri.Hlela ukukhiqizwa futhi ulethe imikhiqizo ngokuhambisana ngokuqinile nezidingo zabasebenzisi kanye namazinga kazwelonke afanelekile, futhi uqinisekise ukuthi imikhiqizo enikeziwe yimikhiqizo emisha nengasetshenziswanga, futhi yenziwa ngezinto ezingavuthiwe ezihambisanayo kanye nobuchwepheshe obuthuthukisiwe ukuze kuqinisekiswe ikhwalithi yomkhiqizo, imininingwane kanye nokusebenza.Izimpahla zithuthwa ngendlela efanele.
Inqubomgomo yekhwalithi, Imigomo Yekhwalithi, Ukuzibophezela
Ikhasimende kuqala;ikhwalithi kuqala, ukulawula inqubo yokulawula eqinile, ukwakha umkhiqizo wesigaba sokuqala.
Ukwaneliseka kwamakhasimende kufinyelela ku-100%;izinga lokulethwa ngesikhathi lifinyelela ku-100%;imibono yekhasimende iyacutshungulwa futhi impendulo 100%.
Ukuze kulawulwe ngempumelelo izinto ezithinta ubuchwepheshe bomkhiqizo, abaphathi kanye nabasebenzi, futhi kuvinjwe futhi kuqedwe imikhiqizo esezingeni eliphansi, inkampani ihlele futhi yakha ngokuhlelekile imibhalo yesistimu yekhwalithi futhi yayisebenzisa ngokuqinile ukuze iqinisekise ukuqinisekiswa kwekhwalithi.Uhlelo luyaqhubeka nokusebenza.
Hlela futhi usebenzise ukwakheka nokuthuthukiswa komkhiqizo ngokuhambisana nohlelo lokulawula ukwakheka ukuze uqinisekise ukuthi umkhiqizo uhlangabezana namazinga kazwelonke afanelekile kanye nezidingo zomsebenzisi.
Ukulawulwa kwemibhalo nezinto zokwakha
Ukuze kugcinwe ubuqotho, ukunemba, ukufana nokusebenza kwayo yonke imibhalo ehlobene nekhwalithi nezinto zokwakha zenkampani, kanye nokuvimbela ukusetshenziswa kwemibhalo engavumelekile, inkampani ilawula ngokuqinile imibhalo nezinto zokwakha.
Ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zekhwalithi zemikhiqizo yokugcina yenkampani, inkampani ilawula ngokuqinile ukuthengwa kwezinto ezingavuthiwe neziyisizayo kanye nezingxenye zangaphandle.Lawula ngokuqinile ukuqinisekiswa kokufaneleka komphakeli kanye nezinqubo zokuthenga.
Ukuze kuvinjwe izinto ezingavuthiwe neziyisizayo, izingxenye ezithengiwe, imikhiqizo eseyiqediwe kanye nemikhiqizo eqediwe ukuthi ingaxutshwa ekukhiqizeni nasekusatshalalisweni, inkampani ibeke indlela yokuhlonza umkhiqizo.Lapho izidingo zokulandeleka zicaciswa, umkhiqizo ngamunye noma iqoqo lemikhiqizo kufanele kukhonjwe ngendlela ehlukile.
Inkampani ilawula ngempumelelo inqubo ngayinye ethinta ikhwalithi yomkhiqizo ohlelweni lokukhiqiza ukuze iqinisekise ukuthi umkhiqizo wokugcina uhlangabezana nezidingo ezishiwo.
Ukuze kuqinisekiswe ukuthi into ngayinye enqubweni yokukhiqiza iyahlangabezana yini nezidingo ezishiwo, izimfuneko zokuhlola nokuhlola zicacisiwe, futhi amarekhodi kufanele agcinwe.
Ukulawulwa kwemishini yokuhlola neyokulinganisa
Ukuze kuqinisekiswe ukunemba kokuhlola nokulinganisa kanye nokwethembeka kwevelu, futhi kuhlangatshezwane nezidingo zokukhiqiza, inkampani ibeka ukuthi imishini yokuhlola neyokulinganisa kufanele ilawulwe futhi ihlolwe.Futhi ukulungisa ngokuhambisana nemithethonqubo.
Ukuqwashisa ngekhwalithi kuhlanganiswe kuzo zonke izici ze-HMKN
Ithimba lenkampani elinolwazi lokulawula ikhwalithi lilandela izindinganiso eziphakeme kakhulu zokuhlola imboni ye-IQC, IPQC ne-OQC ukuze kuqinisekiswe izinga eliphezulu lemikhiqizo.
Ukulawulwa kwemikhiqizo esezingeni eliphansi
Ukuze kuvinjwe ukukhululwa, ukusetshenziswa kanye nokulethwa kwemikhiqizo esezingeni eliphansi, inkampani inemithetho eqinile yokuphatha, ukuhlukaniswa nokuphathwa kwemikhiqizo esezingeni eliphansi.
Izinyathelo zokulungisa nezokuvimbela
Ukuze kuqedwe izici zangempela noma ezingaba khona ezingafanelekile, inkampani ibeka ngokuqinile izinyathelo zokulungisa nezokuvikela.
Ezokuthutha, ukugcinwa, ukupakisha, ukuvikelwa kanye nokulethwa
Ukuze kuqinisekiswe ikhwalithi yokuthengwa kwamanye amazwe kanye nemikhiqizo eqediwe, inkampani iye yakha amadokhumenti aqinile futhi ahlelekile okucubungula, ukugcinwa, ukupakisha, ukuvikela nokulethwa, futhi ilawulwa ngokuqinile.